Apple Store na Taiwan, Final Cut Pro N'ezie, kwurula usoro ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Apple Store na Taiwan, Final Cut Pro N'ezie, kwurula usoro ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Ndewo ndị enyi, otu izu ọzọ anyị nọ ebe a iji nye gị nchịkọta nke akụkọ kachasị ewu ewu n'izu gara aga ruo ụwa nke ngwaahịa na ọrụ Apple. O meela ụbọchị ole na ole kemgbe Okwu Ikpeazụ mana akụkọ na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu na-eme banyere otu kọmputa Apple ọzọ ga-esi bụrụ ma ọ bụ akụkọ dị a haveaa abịa n'okpuru mkpuchi nke macOS High Sierra ọhụrụ.
Yabụ na enweghị mgbatị ọzọ, anyị na-amalite na mkpokọta nke rutere oke ọkụ, yabụ ọ bụrụ na nke a bụ ụsọ osimiri ma ọ bụ ọdọ mmiri taa, nwee obi ụtọ na mgbede na-agụ anyị.
Otu n'ime ozi ọma ahụ abịarutela izu ụka a gara aga bụ ihe mmalite mmalite nke a Apple Store na Taiwan. Ọ bụrụ n ’n’oge ezumike ọzọ ị gbanahụrụ Taiwan, maọbụ ọ bụrụ na ị si ebe ahụ na-agụrụ anyị akwụkwọ, ị nọ n’udo n’ihi na n’oge na-adịghị anya, ọhụụ ọhụrụ ga-adị na ebe a. Apple na-aga n'ihu ịgbasa ya nkịtị ọnụnọ ke Asia ụwa na ama gwa a ozi na ya mpaghara Taiwan website ịkpọsa na-eru nso imeghe ụlọ ahịa azụmaahịa mbụ ya na mba ahụ.
Mgbe akụkọ ahụ gosipụtara otu izu gara aga na WWDC 2017, nke nta nke nta anyị malitere ịmụ banyere atụmatụ ọhụrụ niile nke sistemụ arụmọrụ gosipụtara. Otu n'ime ihe ọhụrụ na 4 nche nche, OS maka Apple Watch, bụ na o doro anya na ọ ga-enwe nhọrọ iji kpọọ oku site na nche n'onwe ya.
Anyị na-abịa gafee ihe na-akpali N'ezie n'ihi na ndị chọrọ ka malitere na ụwa nke Final Cut Pro. Nke a bụ a N'ezie kpamkpam free na maka onye ọ bụla ndị ọrụ na-emetụbeghị ngwa ọrụ a dị egwu, Ikpeazụ Cut Pro. Ndị ọrụ ahụ emetụla ngwa ọrụ ahụ n'oge ụfọdụ nwere ike ọ gaghị enyere gị ezigbo aka na mbụ, mana ọ ga-ekwe omume na ha mụtakwara ihe ha na-amaghị ma ọ bụ meziwanye ụzọ ahụ nke iso otu video edezi ngwá ọrụ dị ka zuru ezu dị ka Final Cut Pro.
Mgbe emechara ụfọdụ ngwa ọrụ teknụzụ kacha mara mma n'ime afọ iri abụọ gara aga, Onye isi ndị uwe ojii Apple, Jony Ive, nwere nchegbu ndị ọzọ n'uche, nchegbu ndị na-enweghị ihe jikọrọ ha na teknụzụ, kama ndụ kwa ụbọchị nke ọtụtụ ndị mmadụ. Fewbọchị ole na ole gara aga, Norman Foster Foundation haziri ogbako nke anyị nwere ike ịhụ Jony Ive dị ka kpakpando ọbịa, bụ onye hapụrụ ndị bịara ya niile mgbe ọ na-ekwupụta ihe ịma aka ọhụrụ ọ chọrọ ihu n'ọdịnihu dị nso: ncha ncha.
Anyị na-aga n'ihu na akụkọ na Ogige buut. Mgbe Microsoft weputara Windows 10, ajụjụ na-adịgide na ikuku bụ ka esi amalite mmelite nke sistemu ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ. N'oge na-adịghị anya mgbe anyị hụrụ otú Microsoft si dabere n'ụkpụrụ ọ bụla, dị ka Apple na-eme, mana na-ekesa ha n'ime afọ. Mgbe ha bụ obere mmelite nwere obere ndozi ma ọ bụ nche nche, enweghị nsogbu. Ma mgbe ọ na-abịa na nnukwu mmelite ihe na-gbagwojuru anya, ebe Apple nwere na melite Boot Camp iji dakọtara na nsụgharị sistemụ arụmọrụ Microsoft kachasị ọhụrụ.
Onye isi Apple Tim Cook n'onwe ya bụ onye nyere scoop a. Apple na-arụ ọrụ metụtara igwe eletriki, mana ọ bụghị ụgbọala n'onwe ya. Ọ bụ ihe gbasara a kwurula usoro ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ onye ma Kedu ụlọ ọrụ bụ onye ga-akụnye ya n'ụgbọ ala ha.
Betasaboa akpe na woakpɔ dzidzɔ. Mgbe izu mara mma nke WWDC ihe niile na-alọghachi na nkịtị na na nke a, anyị na-agbakwunye usoro nke beta ụdị nke usoro ugbu a MacOS na-arụ ọrụ. Na nke a anyị nọ n'ihu nke atọ beta mbipute nke MacOS Sierra 10.12.6 na ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọhụụ ọ ga-abụ ụdị ọhụụ kachasị adị tupu mwepụta nke ọhụrụ macOS High Sierra operating system. Versionsdị beta nke iOS, watchOS na tvOS abịala.
Anyị na-abịa na njedebe nke nchịkọta a na akụkọ na ọ bụ ezie na anyị bụ ndị ọrụ Mac, ọ pụtaghị na anyị nwere onwe anyị pụọ n'ihe egwu na ụdị dị iche iche malware, dị ka ndị ọrụ Windows. N'ezie, mmụba nke Mac ojiji gburugburu ụwa kpatara Ndị ọrụ kọmputa MacOS bụ ihe doro anya maka ụdị ọgụ a. Site na MacOS High Sierra, a na-etinye mmelite nche kachasị ọhụrụ, mana anyị ga-emelite sistemụ arụmọrụ anyị kwa oge iji chekwaa dịka echedoro. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dị mkpa ịghọta otu ihe egwu nwere ike ịdị na ntanetị. Ya mere, taa anyị na-ekwu maka ya MacRansom, ihe ọhụrụ ransomware kere kpọmkwem maka kọmputa kọmputa Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Apple Store na Taiwan, Final Cut Pro N'ezie, kwurula usoro ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Ethernet Ọnọdụ na-egosi anyị akara ngosi furu efu nke ọnọdụ njikọ wired